Maalinta: Maarso 10, 2019
AKP Duqa magaalada Istanbul Binali Yıldırım ayaa sheegay in uu dibad-bax uu ku qabtay Zeytinburnu: y Waxaan leenahay war wanaagsan. Waxay ahayd muddo dheer balse way buuxsantay. Khadka tareenkayagu wuxuu ka yimid Gebze Halkalıama ugu dambeyntii la dhammeeyay, 10 laga bilaabo Maarso [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa diyaarisay sharci u dejinaya xuquuqda rakaabka ku safra jidadka tareenka. Shuruucda waxaa ku jira macluumaad fara badan oo laga soo celinayo tigidhada iyo magdhowga la siinayo rakaabka haddii shil dhaco iyo habraaca loo adeegsado rakaabyada tikidhada la'aan. Turkiga [More ...]
Ku-xigeenka CHP Niğde Ömer Fethi Gürer, 13 Disembar Xawaare Xawaare Sare ah (YHT) oo ka dhacay Ankara oo ay dadka 9 qof ku waayey noloshooda ayaa loo keenay ajandaha Golaha iyadoo la soo jeedinayo. Gürer, sorumluluk masuuliyada shilka [More ...]
Maanta taariikhda: 10 Maarso 1870 Rumeli Rumeli
Maanta oo ku taal Taariikhda 10 Maarso 1870 Qeybta koowaad ee 750 kun oo unug ee xirmayaasha tareenka Rumelian ayaa laga bilaabay isweydaarsiga saamiyada Yurub. Isweydaarsiga saamiyada ee Paris iyo London ma ogolaanayaan iibka debaajiyada, halka sarrifka saamiyada ee Vienna loo oggolaaday inuu iibiyo. [More ...]